Madagasikara mandroso !
FE-POTOAM-PITANTANANA SY ASA MARO
Nanomboka tamin’ny 2013 dia tsapa ny fiovan’ny zotra narahan’i Madagasikara.
Mihatsara ireo tondro ka mitory ny fivoaran’ny toe-karena sy mitondra rivo-baovao ho an’ny firenena.
Fiverenan’ny fitombon’ny harin-karena ho manda fiarovana amin’ny fahantrana
Nanomboka ny taona 2013, dia tsy nitsaha-niakatra ny harin-karena faobe (PIB) :
• +3,3% tamin’ny 2014, +4,2% tamin’ny 2016, tombanana ho 5,1% amin’izao 2018 izao.
• Ny tahan’ny fahantrana dia nihena hatrany nandritr’izay dimy taona lasa izay ka 92% ary lasa 72%.
Niakatra ny fanondranana entana, izay miantoka ny 21% ny harin-karena faobe tamin’ny 2016, ao anatin’izay ny lamba, fambolena ahazoana vokatra fanodina ary indrindra ny lavanila.
Ny fitombon’ny harin-karena dia niara-dalana tamin’ny fanovan-drafitra amin’ireo sehatra maro amin’ny toe-karena (fambolena, indostria, serivisy…) mba hahazoana vokatra tsara kalitao sady betsaka.
Ny fotodrafitr’asa ho an’ny fampandrosoana no laharam-pahamehana
Lalana : Fanohizana ny « Grand Tana » ary fanombohana ireo lalana manodidina na « rocades » (Atsinanana, Avaratra Atsinanana, Andrefana), fanavaozana ireo lalam-pirenena maro, ohatra amin’izany ny lalam-pirenena faha-9 izay mampitohy an’i Toliara sy i Morondava.
Fitaovana iombonana : fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato, fanohizana ny an’i Nosy Be, ireo tetikasa vaovao eo amin’ny sehatry ny rano, ny fitaterana ary ny fambolena.
Fahasalamana : fametrahana ny Tahiry iombonana ho an’ny fiahiana ny fahasalamana taoNiarovana-Caroline, foibe toerana vaovao an’ny Salama, ivotoeram-pitsaboana mora handehanana ao Vangaindrano, Anosiala, Ambohidratrimo, Vohipeno…
Sekoly : fampitomboana avo roa heny ny vola natokana ho an’ny fanabeazana ireo toeram-pampianarana ary ireo toerana fampiofanana naorina manerana an’i Madagasikara : Toamasina, Ambovombe, Anosy, Antananarivo Avaradrano…
Ny fanamboarana, ny fanitarana ary ny fikajiana ireo fotodrafitr’asa dia ilaina amin’ny fitombon’ny harin-karena mba hipaka amin’ny rehetra ny tombontsoa nateraky ny fanatsarana ary handray anjara feno amin’ny fampivoarana ny maha-olona.
Ny toekarena malagasy mampiaty kokoa noho ireo fanavaozana marobe
Petrakarena : misy ny petrakarena narindra amin’ny sehatra toy :
• ny fiahiana sosialy, amin’ny fametrahana ny aratonaina ao amin’ny Faritra Androy sy Anosy ;
• ny Fanabeazana, izay nahafahana nizara fitaovana ho an’ny mpianatra na kit scolaire tany amin’ny sekolim-panjakana fototra ary ireo sekolim-panjakana ambaratonga faharoa tao amin’ny Faritra Analamanga.
Fitovian’ny lahy sy ny vavy : misy asa mitohy nataon’ny governemanta ho an’ny fanatanterahana ny fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy, ary mahatonga an’i Madagasikara ho tsara laharana momba izany raha eto Afrika.
Fampivoarana ny kajy mirindra : natrehana ny ady mba ho tsara kokoa ny fidiran’ny ny kajy mirindra satria i Madagasikara no isan’ny manana ny hafainganam-pandeha tsara indrindra amin’ny fifandraisana aterineto maneran-tany.
Ny fanamby hanome fahafahana ho an’ny sehatra isanisany eo amin’ny tontolon’ny toekarena, ho an’ny faritra tsirairay, ho an’ny sampana tsirairay an’ny firenena mba hanana ny fitaovana hivoarana ary hanasoavana ny fiarahamonim-pirenena malagasy no nitantanana ny fivoarana ara-toekarena.
Madagasikara, Nosy mpamaky lay amin’ny Fiovana ara-angovo
• Fanavaozana ny sehatry ny angovo : fametrahana ny Politika Vaovao ho an’ny Angovo 2015-2030 ho mora kokoa sy mahomby.
• Herinaratra maitso : fitokanana ny ivontoerana famokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro ao Ambatolampy, fanokafana ireo ivontoerana mampiasa ny herin’ny rivotra sy barazy.
• Angovo azo havaozina : fampitomboana ny fampiasana ny rivotra, ny masoandro sy ny rano hahatrarana ny 85%-n’ny fampiarahana ny angovo samihafa.
Fampivoarana ny firenena sy fanokafana ny lalana hisian’ny fisandratana mampiaty dia mitaky ny fanohizana ny modely vaovao momba ny angovo eto Madagasikara ho amin’ny lavitra ezaka.
Madagasikara dia ao anatin’ny firenena fitsidika 10 voalohany manerantany ho an’ny fizahantany
Izay fivoarana izay dia mitarika ny fitombon’ny asa mivantana :
• ka asa 36 700 tamin’ny 2013, dia tafakatra 41 100 tamin’ny 2016.
• Nanaraka izay fiakarana izay koa ny fivoaran’ny petrakarena amin’io sehatra io.
• Ankehitriny, ny vola miditra amin’ny vola vahiny dia mivoatra tsara tokoa ka 390 tapitrisa dolara amerikana izany tamin’ny 2013 ary tonga 748 tapitrisa dolara tamin’ny 2016.
Noho ny harena voajanahary hananany betsaka, hita amin’ny biby sy zava-maniry, Madagasikara dia mitoetra ho nosy mahasarika. Izay toetra mahasarika izay dia mila kajiana ary tohanan’ny daholobe misehatra amin’ny tontolon’ny toekarena.
Madagasikara tafaverina ao anatin’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena
• Firotsahan’ny mpisehatra iraisam-pirenena : fiverenan’ny mpamatsy vola any Madagasikara sy fanavaozana ny fiaraha-miombon’antoka miaraka amin’ny PNUD, ny Banky Iraisampirenena, ny Tahirimbola iraisampirenena, ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana…
• Madagasikara mpikarakara fihaonana maneran-tany : fivoriana antampony an’ny COMESA (oktobra 2016), Fivoriana iraisampirenena an’ny Frankofonia (Novambra 2016), Fivoriana iraisampirenena an’ny mpamatsy vola ho an’i Madagasikara (Desambra 2016).
• Fijery kaontinantaly sy rezionaly : fiverenan’i Madagasikara ao amin’ny Vondrona Afrikanina, Filohan’ny COMESA.
Ny fiverenan’i Madagasikara ao anatin’ny fifandraisana iraisam-pirenena dia isan’ny nanamarika ny efa-taona farany, ahitana fahombiazana eo amin’ny fifandraisana ara-diplomatika sy fiarahana miombon’antoka na politika izany na toekarena na ara-kolontsaina.
Tafaverina ireo andry fototra
• Ady amin’ny trafika sy ny kolikoly : fametrahana ny Fitsarana manokana miady amin’ny fanondranana ny andramena, fametrahana ny Pôles Anti-corruption.
• Fampihavanam-pirenena sy fitoniana : famporisihana ny fifanakalozana politika, fikatsahana fanelanelana sy fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny olompirenena malagasy
• Fahalalahan’ny Fitsarana : fizakantena sy fahafahan’ny Fitsarana avo mandray fanapahankevitra, fisarahan’ny fahefana politika sy ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco, famerenana ny fahatokisana amin’ny rafitry ny fitsarana.
Famerenana ny andrim-panjakana eo anivon’ny fiainana politika, dia fanomezana toky fa hovoahaja ny lalàna mifehy ny fahasamihafana demokratika, ny intégrité sy ny fahafahan’i Madagasikara.
TENY INDRAIM-BAVAN’NY KANDIDA
ZAHAO NY PROGRAMAKO
TOHANO HERY 2018 #Ekipahery